on-line ahama birta - Shiinaha Langzhi Alxanka Qalabka
Guudmarka nidaamka Tani waa ganged mashiinka biibiile-samaynta. Waa in la isku aadiyo karaa noocyo badan oo qaabeynta ku xiran tahay lagama maarmaan. P + T: Waayo shot feedh, plasma la qaatay doonaa bottoming ka doodida si ay u sameeyaan kama tollayn alxanka uu ku noqon karo mid ka mid ah celcelis ahaan line toos ah (One shot gudbi karin 8mm ama bellowing saxan oo dhumucdiisuna waxay). Waayo, shot labaad, ARC argon alxanka mashiinka loo isticmaali doonaa si ay u sameeyaan dayactirka dusha siman oo aan sidewall wiiqdo .. T + P + T: shot First waa preheat la alxanka arc argon, s ...
Nidaamkan waxaa ganged mashiinka biibiile-qaadashada. Waa in la isku aadiyo karaa noocyo badan oo qaabeynta ku xiran tahay lagama maarmaan.
P + T: Waayo shot feedh, plasma la qaatay doonaa bottoming ka doodida si ay u sameeyaan kama tollayn alxanka uu ku noqon karo mid ka mid ah celcelis ahaan line toos ah (One shot gudbi karin 8mm ama bellowing saxan oo dhumucdiisuna waxay). Waayo, shot labaad, ARC argon alxanka mashiinka loo isticmaali doonaa si ay u sameeyaan dayactirka dusha siman oo aan sidewall wiiqdo ..
T + P + T: shot First waa preheat la alxanka arc argon, shot labaad waa in la isticmaalo plasma alxanka ka doodida iyo shot saddexaad waa in la dayactiro adigoo isticmaalaya argon alxanka ARC, ama ku daray heli alxanka-silig si ay u sameeyaan kama tollayn alxanka dibadda dusha module qurux badan . nidaamka Tani waa ku haboon line been biibiile SS dhumucdiisuna 1.8mm-12mm.
T + T + T: By dhaqmaadka technology alxanka pole Muti-negative, qotomiyey 3 waxaa alxanka kaalinta on line alxanka been abuurtay, xawaaraha alxanka loo horumarin doonaa by calories daboolaa. shot First leedahay shaqo-arc kasii darto, waxa ay wax ku ool ah ka saari waayeen saliid iyo wasakhnimada iyo pre-kulaylka for shaqo-piece. U dir shot waa waayo alxanka ka doodida iyo shot saddexaad waa in la dayactiro. Tani wax ku ool ah ka fogaan wayay keenaya qodan / pore / ciid-dalool iwm Waxaa si weyn loo usded galay alxanka ee tube fasalka caafi / tube kulaylka-dhaafsiga / tube condenser qaado cuntada iyo Tube Ti
alxanka hadda 0-500A
xawaaraha alxanka 0-3000mm / min
dhumucdiisuna alxanka 2-12mm
: Previous alxanka guddiga jointed
Daawaha Steel Alxanka
Dabaq Steel Alxanka
Ahama Steel tuuboyinka Alxanka Qalabka